Isandra : Omby 437 lasan’ny dahalo – Midi Madagasikara
You Are Here: Home → Faits-Divers → 2019 → février → 6 → Isandra : Omby 437 lasan’ny dahalo
Saika isan’andro tato ho ato, dia andrenesam-baovao mahakasika ny fanafihan-dahalo hatrany any amin’ny Distrikan’ Isandra, Faritra Matsiatra ambony. Ny 1 febroary teo, tokony ho tamin’ny 9 ora sy sasany naraina, 40 lahy nirongo basy mahery vaika nanafika tao Ambalavao Ampasika, any amin’ny Kaominina ambanivohitry Mahazoarivo, ka norobain’ ireo dahalo avokoa ny fananan’ny mponina teo an-tanàna, toy ny : kisoa, akoho amam-borona, kojakojan-tokantrano, . . . Nandritra ity fanafihana ity, tovolahy iray no namoy ny ainy voatifitra teo amin’ny lohany, raha toa ka teo amin’ny sandriny kosa no niantefa ny bala tamin’ny rahalahiny. Ity farany moa raha araka ny tati-baovao voaray hatrany, dia mbola miady mafy amin’ny fahafatesana noho ny ratra mafy nahazo azy, izay manaraka fitsaboana ao amin’ny hopitalibe Tambohobe Fianaratsoa. Raha ny tatitry ny Ben’ny tanàna any an-toerana, dia fanafihan-dahalo miisa 12 be izao no niseho tao amin’ny Kaominina Mahazoarivo, tantanany, nanomboka ny 18 desambra 2018 ka hatramin’ny 17 janoary lasa teo, ary omby 437 no lasan’ireo dahalo, ankoatry ny fambolen’ny mponina eny an-tsaha mbola tsy matoy izay otazan’ireo mpanani-bohitra.
Miparitaka ny 20.000 Ariary sandoka
Mpivarotra maro no efa lasibatra amin’ny fiparitahan’ny vola sandoka roa alina ariary ao an-drenivohitry ny Faritra Boeny, ka ny entam-baraotra lafo vidy toy ny telefaonina no tena jonoin’ireo olon-dratsy. Araka ny nambaran’ireo mpivarotra efa lasibatra, dia tsy miady varotra ary tsy manao andrana akory izy ireo rehefa mividy finday, fa tonga dia lasa rehefa avy nanolotra an’ireo vola sandoka vidin’entana. Rehefa lasa 15 na 30 minitra ireto mpitondra vola sandoka izay voalaza fa miaraka roa lahy isanisany hatrany ireto, izay vao taitra sy tonga saina ny mpivarotra voajonon’izy ireo. Manoloana an’ity tranga mahazo vahana sy mahavalalanina ny maro ao an-tampon-tanànan’i Mahajanga ity, dia efa nisy ny fampahafantaran’ireo lasibatra ny mpitandro filaminana, ka hinoana fa hahitam-baliny tsy ho ela ny fikarohana an’ireo mpanao heloka bevava.
Tapaka tanteraka ny jiro sy rano
Miaina tanteraka ao anaty fahasahiranana noho ny tsy fisian’ny famatsian-jiro sy rano ny mponina any amin’ny Distrikan’i Fenoarivobe ankehitriny. Araka ny nambaran’ny tompon’andraikitry ny Jirama any an-toerana, dia noho ny tsy fahatongavan’ny solika mampihodina ny milina mpamokatra herinaratry ny Jirama no antony mahatonga izany. Vokatr’izany, mikatso ny asam-panjakana sy ny fiainan’ny mponina andavan’andro. Mikainkaina mafy amin’ny tsy fisian-jiro ity ireo olona izay mivelona tanteraka amin’ny herinaratry ny Jirama. Araka ny tati-baovao voaray, afak’omaly, adiny telo monja no nandeha ny jiro, ary nanomboka omaly, dia tapaka tanteraka ny herinaratra sy ny famatsian-drano. Hatreto, tamin’ny fotoana nanoratana ny lahatsoratra, araka ny fanazavana azo hatrany, dia tsy mbola fantatra mazava ny andro hahatongavan’ny solika.
Kitrotro : 13 ny maty
Tafakatra 440 ankehitriny ireo voan’ny kitrotro any amin’ny Fari-piadidiam-pahasalamana Ambanja, ka ny 13 amin’ireo no namoy ny ainy, izay maty teny anivon’ny fiarahamonina nisy azy ny marary 11, raha teny amin’ny hopitaly ny roa. Noho ny firongatr’ity valan’aretina ity mamely mafy ao an-drenivohitry Sambirano, dia feno hipoka ny hopitaliben’ Ambanja, ary tsy mitsaha-mitombo ireo marary avy any ambanivohitra tonga mitsabo tena, ka tsaboina maimaimpoana avokoa ireo marary. Araka ny fanazavan’ny « Médecin Inspecteur », Dr Paulin, dia ny zaza latsaky ny dimy taona no tena lasibatry ny kitrotro. Raha ny fampitam-baovao azo hatrany, dia efa nahitana ny valan’aretina kitrotro ihany koa ny fonja any an-toerana. Mba hisorohana ny faty olona tsy hitombo isa, dia mitohy hatrany ny fanentanana atao mba hanatonan’ny olona ny tobim-pitsaboana raha vao manomboka ny aretina na misy soritr’aretina tsy azoazo mitranga.